ဘယ်အချိန်မှာသူ့ကို ဖေဖေ၊မေမေ တို့နဲ့ ပေးတွေ့သင့်ပြီလဲ - For her Myanmar
ဘယ်အချိန်မှာသူ့ကို ဖေဖေ၊မေမေ တို့နဲ့ ပေးတွေ့သင့်ပြီလဲ
မေမေ နဲ့ လာတွေ့ပါ အချစ်ရယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီလားဆိုတော့ …
ချစ်ကြပြီဆိုမှတော့ နှစ်ဦးတည်း၊ နှစ်ယောက်တည်း ချစ်ကြရုံနဲ့ မပြီးလေသေးဘူးနော်။ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေ သေချာဆွဲပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို ဖေဖေမမေတို့နဲ့ ပေးတွေ့ဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒါဆို ဘယ်အချိန်ကများ သူ့ကို ဖေဖေ မေမေ တို့နဲ့ ပေးတွေ့သင့်တာလဲဆိုတော့ …
(၁) သူ က ကိုယ့်ဖူးစာရှင်ဆိုတာ သေချာပြီဆိုရင်
ရည်းစားဖြစ်ရုံနဲ့ ကိုယ့်မိဘတွေကို မိတ်ဆက်မပေးချင်တာတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်နော်။ တော်ကြာ ခဏလေးတွဲပြီး အခန့်မသင့်လို့ ပြတ်သွားတာမျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဆူခံရတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်နော်။ ဒီတော့ သူ နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ခိုင်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးဆိုတာ သေချာပြီဆိုမှသာ ပေးတွေ့လိုက်ပါ။
Related Article >>> နှစ်သစ်အတွက် ချစ်သူနဲ့အတူလုပ်သင့်တဲ့ နှစ်ကိုယ်တူ နှစ်သစ်ရည်မှန်းချက်များ
(၂) သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သေချာသိပြီဆိုရင်
ကိုယ်လက်ထပ်ရမယ့်သူဆိုတာ သူ နဲ့ သူ့မိဘတွေပြီးရင် ကိုယ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူ့အကြောင်းအသိဆုံးသူ ဖြစ်ရလောက်အောင်ကို သူ့အကြောင်းသိထားရမှာလေ။ ဒါက အရေးကြီးပါတယ်။ (Facebook Password တောင်းတာမျိုးကို မဆိုလို)
သူက ဘယ်လို စိတ်ထားရှိသူလဲ၊ သူ့အားနည်းချက် အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ၊ သူ့ရဲ့ ဘဝ ရည်မှန်းချက် ဘယ်လောက်ရှိလဲ စတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလို သိထားပြီးသားသူဆိုရင် ကိုယ့်မိဘတွေကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီပေါ့နော်။
ရွှေလက်တွဲ မြဲပြီဆိုရင် …
(၃) သူက လူကြီးတွေ သဘောကျလောက်တဲ့ ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်ချစ်သူက လူငယ်ဆန်သည်သည်ဖြစ်စေ၊ လူကြီးဆန်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လို ပုံစံဝတ်စားနေထိုင်တတ်သူဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက လူကြီးတွေကို တလေးတစားဆက်ဆံတတ်သူ ဖြစ်ဖို့ပါ။ လူကြီးတွေကို ကြောက်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်…
လူကြီးတွေမေးရင် ဖြေချင်သလိုလို မဖြေချင်သလိုလို၊ ဂျစ်ကန်ကန် နဲ့ အရွဲ့တိုက်ချင်သလိုလို၊ ပြောစကားတွေက အလေးအနက်မရှိ၊ လူကြီးတွေ စိတ်ပျက်စေမယ့် အရိုအသေတန်တဲ့ စကားတွေကို တွင်တွင်ပြောတတ်သူဆိုရင်တော့ ယောင်းမိဘတွေ သဘောကျမယ် မထင်ပါဘူးယောင်းရေ။ ဒီလို လူမျိုးနဲ့သာ မိတ်ဆက်ပေးမိလို့ကတော့ နင်ဘယ်လိုလူနဲ့ ကြိုက်နေတာလဲ ဆိုပြီး အဆူခံရပါလိမ့်မယ်နော်။
Related Article >>> အချစ်က ကျန်းမာရေး ကောင်းစေလား?
(၄) သူငယ်ချင်း၊ မောင်နှမ တွေနဲ့ အရင်ပေးတွေ့ပါ။
မိဘတွေနဲ့ ပေးတွေ့ခြင်း ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို မရောက်ခင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပေးတွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်ကို အရင်ဖြတ်ကျော်လိုက်ပါ ယောင်းရေ။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး သူတို့နဲ့ အဆင်ပြေမပြေ အရင်ကြည့် သူတို့ဘက်က အိုကေတယ်လို့ မီးစိမ်းပြတာနဲ့ မိဘတွေနဲ့ ပေးတွေ့ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတော့နော်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ချစ်သူကို မိဘတွေနဲ့ ပေးတွေ့ဖို့ အချိန်တန်မတန်ဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။ မိဘတွေနဲ့ ပေးတွေ့ပြီး အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ရင် အက်ဒ်မင့်ကို ဖိတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
References : elitedaily, hercampus
မမေေ နဲ့ လာတှပေ့ါ အခဈြရယျလို့ ပွောနိုငျပွီလားဆိုတော့ …
ခဈြကွပွီဆိုမှတော့ နှဈဦးတညျး၊ နှဈယောကျတညျး ခဈြကွရုံနဲ့ မပွီးလသေေးဘူးနျော။ အနာဂတျအစီအစဉျတှေ သခြောဆှဲပွီးကွပွီဆိုရငျတော့ သူ့ကို ဖဖေမေမတေို့နဲ့ ပေးတှဖေို့လိုလာပါပွီ။ ဒါဆို ဘယျအခြိနျကမြား သူ့ကို ဖဖေေ မမေေ တို့နဲ့ ပေးတှသေ့ငျ့တာလညျးဆိုတော့ …
(၁) သူ က ကိုယျ့ဖူးစာရှငျဆိုတာ သခြောပွီဆိုရငျ
ရညျးစားဖွဈရုံနဲ့ ကိုယျ့မိဘတှကေို မိတျဆကျမပေးခငျြတာတော့ လူတိုငျးသိပါတယျနျော။ တျောကွာ ခဏလေးတှဲပွီး အခနျ့မသငျ့လို့ ပွတျသှားတာမြိုးဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ။ အဆူခံရတာပဲ အဖတျတငျပါတယျနျော။ ဒီတော့ သူ နဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ဆကျဆံရေးက ခိုငျမွဲတဲ့ ဆကျဆံရေးဆိုတာ သခြောပွီဆိုမှသာ ပေးတှလေို့ကျပါ။
Related Article >>> နှဈသဈအတှကျ ခဈြသူနဲ့အတူလုပျသငျ့တဲ့ နှဈကိုယျတူ နှဈသဈရညျမှနျးခကျြမြား
(၂) သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး သခြောသိပွီဆိုရငျ
ကိုယျလကျထပျရမယျ့သူဆိုတာ သူ နဲ့ သူ့မိဘတှပွေီးရငျ ကိုယျက ကမ်ဘာပျေါမှာ သူ့အကွောငျးအသိဆုံးသူ ဖွဈရလောကျအောငျကို သူ့အကွောငျးသိထားရမှာလေ။ ဒါက အရေးကွီးပါတယျ။ (Facebook Password တောငျးတာမြိုးကို မဆိုလို)
သူက ဘယျလို စိတျထားရှိသူလဲ၊ သူ့အားနညျးခကျြ အားသာခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ၊ သူ့ရဲ့ ဘဝ ရညျမှနျးခကျြ ဘယျလောကျရှိလဲ စတာမြိုးတှပေေါ့။ ဒီလို သိထားပွီးသားသူဆိုရငျ ကိုယျ့မိဘတှကေို ယုံကွညျမှုရှိရှိ မိတျဆကျပေးနိုငျပွီပေါ့နျော။
ရှလေကျတှဲ မွဲပွီဆိုရငျ …
(၃) သူက လူကွီးတှေ သဘောကလြောကျတဲ့ ပုံစံမြိုးရှိတယျဆိုရငျ
ကိုယျ့ခဈြသူက လူငယျဆနျသညျသညျဖွဈစေ၊ လူကွီးဆနျသညျဖွဈစေ၊ ဘယျလို ပုံစံဝတျစားနထေိုငျတတျသူဖွဈစေ အရေးမကွီးပါဘူး။ အရေးကွီးတာက လူကွီးတှကေို တလေးတစားဆကျဆံတတျသူ ဖွဈဖို့ပါ။ လူကွီးတှကေို ကွောကျနဖေို့ပွောတာမဟုတျဘူးနျော…
လူကွီးတှမေေးရငျ ဖွခေငျြသလိုလို မဖွခေငျြသလိုလို၊ ဂဈြကနျကနျ နဲ့ အရှဲ့တိုကျခငျြသလိုလို၊ ပွောစကားတှကေ အလေးအနကျမရှိ၊ လူကွီးတှေ စိတျပကျြစမေယျ့ အရိုအသတေနျတဲ့ စကားတှကေို တှငျတှငျပွောတတျသူဆိုရငျတော့ ယောငျးမိဘတှေ သဘောကမြယျ မထငျပါဘူးယောငျးရေ။ ဒီလို လူမြိုးနဲ့သာ မိတျဆကျပေးမိလို့ကတော့ နငျဘယျလိုလူနဲ့ ကွိုကျနတောလဲ ဆိုပွီး အဆူခံရပါလိမျ့မယျနျော။
Related Article >>> အခဈြက ကနျြးမာရေး ကောငျးစလေား?
(၄) သူငယျခငျြး၊ မောငျနှမ တှနေဲ့ အရငျပေးတှပေ့ါ။
မိဘတှနေဲ့ ပေးတှခွေ့ငျး ဆိုတဲ့ နောကျဆုံးအဆငျ့ကို မရောကျခငျ ကိုယျ့သူငယျခငျြး၊ မောငျနှမတှနေဲ့ ပေးတှခွေ့ငျးဆိုတဲ့ အဆငျ့ကို အရငျဖွတျကြျောလိုကျပါ ယောငျးရေ။ သူငယျခငျြးတှေ၊ မောငျနှမတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးပွီး သူတို့နဲ့ အဆငျပွမေပွေ အရငျကွညျ့ သူတို့ဘကျက အိုကတေယျလို့ မီးစိမျးပွတာနဲ့ မိဘတှနေဲ့ ပေးတှဖေို့ စီစဉျလိုကျပါတော့နျော။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျ ကိုယျ့ခဈြသူကို မိဘတှနေဲ့ ပေးတှဖေို့ အခြိနျတနျမတနျဆိုတာ သိလောကျပွီပေါ့နျော။ မိဘတှနေဲ့ ပေးတှပွေီ့း အဆငျပွသှေားပွီဆိုရငျတော့ မင်ျဂလာဆောငျရငျ အကျဒျမငျ့ကို ဖိတျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Tags: Couple, Family, love, Relationship
ကိုယ့်ဘရာဆိုဒ်အမှန်ကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ဒီလိုတိုင်းမယ်